English Speaking Basics (40) အင်္ဂလိပ်စကားပြော အခြေခံများ (၄၀) ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
English Speaking Basics (40) အင်္ဂလိပ်စကားပြော အခြေခံများ (၄၀)
တစ်ခါတလေမှာ တစ်စုံတစ်ခုဟာ မဖြစ်မှာသေချာတယ် ၊ မလုပ်မှာသေချာတယ် .. ဖြစ်ဖို့ရာ အကြောင်းမရှိဘူးလို့ သေသေချာချာ ငြင်းဆိုချင်တဲ့ အခါတွေလည်း ရှိပါလိမ့်မယ် ၊ အဲလိုပြောချင်တဲ့ စိတ်ကူးမျိုး ပေါ်လာတဲ့အခါ ဟောဒီပုံစံလေးကို သုံးလိုက်နိုင်ပါတယ်..
THERE'S NO WAY + (SUBJECT + VERB)
By stating 'there's no way' you are relayingathought of doubt about an event taking place now or in the future.
There is no way : Certainly not; never.
(1) There's no way our candidate can lose.
ကျနော်တို့ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းက ရှုံးနိုင်ဖို့ အကြောင်းမရှိပါဘူး
(Candidate (n) ရွေးကောက်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း)
(2) There's no way you finish on time.
ခင်ဗျား အချိန်ကိုက်ပြီးစီးဖို့ လုံးဝမဖြစ်နိုင်တာ သေချာပါတယ်
(3) That's no way to disrespect to your mother!
မင်းရဲ့အမေကို မလေးမစားပြုဖို့ လုံးဝအကြောင်းမရှိဘူးနော်!
(dis-respect (v) မလေးမစားပြုသည် ၊ မရိုမသေပြုသည်)
(4) There's no way they expect it.
သူတို့ အဲဒါကို မျှော်မှန်းဖို့ အကြောင်းမရှိပါဘူး
(5) There's no way he can fix it.
သူက အဲဒါကို ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ အကြောင်းမမြင်ပါဘူး
(6) There's no way he can handle the problem.
သူပြဿနာကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အကြောင်းမရှိပါဘူး
(7) There's no way your brother injured his ankle.
ခင်ဗျားရဲ့အကို ခြေကျင်းဝတ် ဒဏ်ရာရခဲ့ဖို့ အကြောင်းမရှိပါဘူး
(ankle (n) ခြေကျင်းဝတ်)
(8) There is no way he missed it.
သူ အဲဒါကို လွဲချော်သွားခဲ့ဖို့ လုံးဝမဖြစ်နိုင်တာ သေချာပါတယ်
(9) There’s no way this sentence is wrong.
ဒီဝါကျ မှားဖို့ အကြောင်းမရှိပါဘူး
(10) There’s no way The PM will accept an invitation.
၀န်ကြီးချုပ်က ဖိတ်ကြားချက်ကို လက်ခံလိမ့်မယ်ဆိုတာ လုံးဝ ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိပါဘူး
(PM = Prime Minister ၀န်ကြီးချုပ်)
စကားပြောတဲ့အခါမှာ ရှေ့ဆုံးက There’s ကို ဖြုတ်ပြီးတော့ No way ကနေစပြီးလည်း ပြောတဲ့ အခါတွေလည်းရှိပါတယ် ၊ နည်းနည်းရိုင်းပါတယ် ယေဘူယျ ယူဆချက်အရတော့ အဖွင့်စကားလုံးလေးတွေ ယဉ်ကျေးမှုပြစကားလုံးလေးတွေနဲ့ ရှည်ရှည်ပြောတာက ပိုယဉ်ကျေးပြီး တိုတိုပြောတာတွေက ရိုင်းပါတယ်.. ဘာသာစကားအားလုံးနီးပါး ဒီအတိုင်းပါပဲ..
(11) ‘Do you want to help?’ ‘No way!’
အကူအညီပေးလိုပါသလား ။ (ပေးဖို့) အကြောင်းမရှိဘူး!
တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ကျနော်တို့ မကြာခဏ ကြားလေ့ကြားထရှိတဲ့ စကားစုလေးတွေကိုပါ အဆစ်ပေးလိုက်ချင်ပါသေးတယ်.. အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ way က နည်းလမ်းကို ကိုယ်စားပြုတယ် ၊ အခုအောက်မှာ ပြောမှာက way = လမ်းကြောင်း ဖြစ်ပါတယ် .. မတူပါဘူးနော်
(1) ON THE WAY / ON ONE’S WAY = လမ်းကြုံတယ် ၊ သွားတဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ရှိတယ်
(1.1) I met Tom on the way.
ကျနော်က တွန်မ်ကို သွားရင်းလာရင်း လမ်းပေါ်မှာပဲ တွေ့ခဲ့တာပါ
(1.2) We're on our way home.
ကျနော်တို့ အိမ်ကိုသွားတဲ့ လမ်းပေါ်မှာရှိတယ် ၊ အိမ်ပြန်နေကြပြီ
(1.3) I met her on my way to school.
သူမကို ကျနော်ကျောင်းသွားတဲ့လမ်းမှာ ဆုံခဲ့တာပါ
(1.4) It’s on my way, I will take you to your home.
လာပါ ..လမ်းကြုံပါတယ် ၊ ကျနော် ခင်ဗျားအိမ်ကို လိုက်ပို့ပေးပါမယ်
(2) OUT OF ONE'S WAY = လမ်းမကြုံဘူး
(2.1) Don't bother picking me up. It's out of your way.
ကျနော့်ကို တင်ခေါ်ပြီး ဒုက္ခမခံပါနဲ့ ၊ ခင်ဗျားနဲ့ လမ်းမကြုံပါဘူး (ခင်ဗျားသွားမယ့်လမ်းနဲ့ လမ်းကြောင်းမတူပါဘူး)
(3) GO ONE'S WAY = လမ်းကြောင်းအတူတူသွားတယ် ( ရှေ့ဆုံးမှာ on နဲ့ go ပြောင်းသွားတယ်နော်)
(3.1) I'm going your way—I'll walk with you.
ကျနော်ခင်ဗျားသွားမယ့် လမ်းအတိုင်းပဲလိုက်တော့မယ် ၊ ခင်ဗျားနဲ့အတူ လမ်းလျှောက်မယ်